Chelsea oo dooneysa inay dib usoo ceshato Eden Hazard – Gool FM - Idman news
Chelsea oo dooneysa inay dib usoo ceshato Eden Hazard – Gool FM
(London) 22 Luulyo 2021. Sida lagu helayo wararka ka imaanaya dalka Spain, kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa rog-rogeysa aragtida ah inay dib ula soo saxiixato laacibka Real Madrid ee Eden Hazard xagaagan.
Kabtanka xulka qaranka Belgium ayaa labo xilli ciyaareed kahor ka dhaqaaqay garoonka Stamford Bridge balse waxa uu wajahay waqti adag tan iyo markii uu 2019 ugu wareegay Madrid lacag dhan 88 milyan oo gini.
Warsidaha Isbaanishka ah ee AS ayaa sheegay inay koox wakiillo wakiillo ah ay ka shaqeynayaan inay Hazard kusoo celiyaan Chelsea iyadoo sidoo kalena Los Blancos la sheegay inay diyaar u tahay iibinta 30-sano jirkan haddii ay 51 milyan oo gini ku hesho xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigan garabka ka ciyaara ayaa 21 kulan oo qura u saftay Real Madrid xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay maadaama ay dhaawacyo halakeeyeen, waxaana u sii dheer keliya inuu shan gool dhaliyay labadii fasal ee uu ku sugnaa caasimadda Spain inkastoo uu 10 gool ama wax ka badan uu dhaliyay lix ka mid ah toddobadii xilli ciyaareed ee uu ka tirsanaa The Blues.
Previous David Alaba oo ugu dambeyntii Sergio Ramos ka dhaxlay lambarka 4-aad ee Kooxda Real Madrid – Gool FM
Next Liverpool oo dalab ka kooban kala doorashada laba xiddig iyo lacag u bandhigtay Atletico Madrid si ay kaga soo qaadato Saul – Gool FM